Afgaanistaanitti bombiin cidha irratti dhohuun lubbuu namoota 63 galaafate - BBC News Afaan Oromoo
Afgaanistaanitti bombiin cidha irratti dhohuun lubbuu namoota 63 galaafate
18 Hagayya 2019
Goodayyaa suuraa Hojjattoonni fayyaa biyyattii namoota miidhaan irra qaqabeen gara hospitaalaatti geessaa jiru
Afgaanistaan Magaalaa Kaabuuliitti boombiin sirna cidhaarratti dhoo'ee namoota 63 yoo galaafachuun180 kan biraa ammoo madeesseera.
Namoonni ijaan argan BBC'tti akka himaniitti nama badee balleessaa tokkotu sirna cidhaa irratti boombiicha dhoosee.
Dhoohinsi kunis akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii 22:40 irratti kan qaqabee yoo ta'u taatee kunis magaalaa islaamootni shiyaa keessatti baay'atan keessaatti qaqabae.
Gareen Taaliibaa gochiicha keessaa harka qabaachuu haalaniiru. Qaamni hanga yoonaatti itti gaafatamummaa fudhate kan biraas hinjiru.
Milishoonni musilima Sunni warra Taalibaanootaa fi garee motummaa Islaamaa dabalatee, Afiigaanistaaniifi Paakistaan keessatti warra lakkoofsaan gadaanaa ta'an warra Shiyaa Hazaraa irratti xiyyeeffatu.
Taatee kanaaf maal beekna?
Ministeerri dhimma biyya keessaa Afgaanistaan dhohinsichi qaqabee sa'aatii muraasa keessatti namoonni baay'een ajjeefamuu mirkanneessaniiru. Suuraaleen midiyaalee hawaasaatiin qoodamaa turanis, namoonni sirna cidhaarratti miidhaman baay'een kufanii mul'isa.
Akkuma aadaa biyyatiitti sirna cidhaa Afgaanistaan sana irratti namoonni dhibbaan lakkaa'aman hedduun kan irratti argaman yoo ta'u, bakka warreen dhiiraa dubartotaa fi daa'immanii taa'ana adda bahuun itti hirmaatan ni qophaa'a.
Keessuummaan cidhichaa Mohaammad Faarhag akka jedheetti dhohinsicha lafa warri dhiiraa turanii wayita dhagahuutti inni gara kutaa dubartootaa ture.
Goodayyaa suuraa Lafti sirna cidhichaa mataansaa miidhameera
"Namoonni hunduu iyyaa fi boo'aa alatti gadi fiigan," jechuun AFPtti hime.
"Gara daqiiqaawwan 20'f galmichi aaraan guutamee ture. Namoonni galma dhiiroonni taa'anii turan jiran hundi miidhamaniiru ykn ajjeefamaniiru."
Keessummeessaan galmicha keessa ture, Saayed Aghaa Shah, ''dhoohinsaan booda hunduu ni fiiga ture,'' jedheera.
''Keessummeesitoonni keenya hedduunis ajjeefaman ykn miidhamaniiru,'' jedha.
Dubbii himaan garee Taalibaan halleelaa kana ''cimsuun balaaleeffataniiru.''
''Gocha fi ajjeechaa gara jabiinaa daa'immaniifi dubartoota irratti xiyyeeffate akkasii kanaaf sababiin hin jiraatu'' Zaabi'ullah Mujaaheed jechuun midiyaaf barreessaniiru.
Ka'umsi isaa Maal ture ture?
Halleellaan kunis erga dhohiinsi guddaan buufata poolisii Kaabul fulduratti qaqabee guyyoota 10 booda kan raawwatameedha. Dhohiinsa sanaanis namoonni 14 kan ajjeefaman yoo ta'u, gara 150 kan ta'an ammoo madaa'aniiru.
Haalleellaa sanas Taalibaa raawwachu fudhateera.
Guyyaa Jimaataa obbooleessi Hogganaa Taalibaan Hibatullah Akhundzada boombii masjiida keessatti awaalameen magaalaa Qu'ettaatti ajjeefameera.
Gocha sana gareen fudhate tokkoleen hin ture.
Taalibaaniifi Ameerikaan, kan loltoota kumaatama biyyattii keessatti bobbaafte jirtu jidduutti marii nagaatiin waliigalteerra gahamuuf jedhamulleen ammas biyyattii keessa rakkoo cimaatu jira.
Goodayyaa suuraa Firoonni baadda'an ala hospitaalaatti waliitti qabamuun eegataa jiru
Mariin nagaa Afgaanistaan attamiin deemaa jira?
Bakka butoonni Taalibaan fi Ameerikaan magaalaa guddoo Qaataar Dohaa keessatti marii taasisaa kan jiran yoo ta'u adeemsichis haala gaariirratti argama jedhameera.
Guyyaa Jimaataa ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp 'yoo danda'amee qaamooleen lamaanuU waliigaltee taasisuuf barbaadu, jechuun tiwitii godhanii ture.
Waliigaltichis Ameerikaan loltoota ishee gutummaatti baasuun, Taalibaan ammoo biyyattiin akka gareewwan mankaraarsitootaa Ameerikaarratti xiyyeeffatan itti hin fayyadamne gochuuf itti gaafatamummaa fudhachu dabalata.
Akkasumas Taalibaan bakka bu'oota Afgaanistaan waliin adeemsa nageenyaa fi dhukaasa dhaabuu irratti walii galtee taasisuu ni eegalu ta'a.
Milishoon kunneen garuu hanga yeroon loltoonni Ameerikaa biyyaatti itti bahan beelamamuutti motummaa Afgaan waliin marii'achuuf didaa turan.
Taalibaanoonni amma yeroo aangoorra itti harii'ataman bara 2001 caalaa daangaawan heddu to'ataniiru.
Afgaanistaan: Taaliibaan waajjira ol aanaa poolisii Afgaanistaan gara Kaabaa jiru haleele